Purism Librem 5 ga-abata na nkeji nke atọ nke 2019 | Site na Linux
Purism Librem 5 ga-abata na nkeji nke atọ nke 2019
Purism taa mara ọkwa na nchedo nzuzo ya na nzuzo na-elekwasị anya na Linux mobile, Librem 5, egbuola oge na nkeji nke atọ nke 2019.
Na mbu emere atụmatụ maka mbido 2019, Librem 5 mobile na-egbu oge rue Eprel 2019 na ugbu a enwe oge ọzọ n'ihi nhọrọ CPU na ndị otu mmepe ga - eme ka ịnwe igwe kwụsie ike ma nwee ntụkwasị obi nke na - agaghị ekpo oke ọkụ ma ọ bụ budata ngwa ngwa.
Otu mmepe ahụ ga-ahọrọ n'etiti iMX8M Quad na i.MX8M Mini processors maka mkpanaka ha, mana mgbe ọtụtụ ule gachara, ha kpebiri na i.MX8M Quad dị ka onye nrụpụta wepụtara mmelite nke na-edozi ike na oke nsogbu.
Atụmatụ emelitere maka Librem 5
Iji mee ka ihe na-atọ ụtọ, Purism emelitere atụmatụ nke Librem 5, nke ga-abịa na a 5.5 ma ọ bụ 5.7 Inch ihuenyo na mkpebi HD, i.MX8M Quad processor, 32 GB eMMC nchekwa dị n'ime, Ikuku 802.11 a / b / g / n 2.4Ghz + 5Ghz, Bluetooth 4 na Gemalto PLS8 3G / 4G modem nwere otu oghere SIM.
Na mgbakwunye, ngwaọrụ ahụ ga-enwe nkwado maka kaadị smart 2FF, opekata mpe otu ọkà okwu na nkwado maka kaadị MicroSD. Enwebeghị data igwefoto ma, ma Purism kwuru na ngwaọrụ ga-enwe njikọ USBC, ọrụ ndị ahịa USB, ọrụ nnabata USB na nnyefe ike.
A na-agbakwunye ngwa ngwa 9-axis, magnetometer, gyroscope na moto vibration. Ngwaọrụ ahụ, nke ga-enwe batrị a na-edochi anya ya, nwere ihe ọ ga-eme bọtịnụ atọ iji gbanyụọ WiFi, ekwentị, igwe okwu na igwefoto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Purism Librem 5 ga-abata na nkeji nke atọ nke 2019
Linus Torvalds na-ekwu na ARM abụghị maka ahịa sava